Biko gụọ FAQ anyị tupu izipu anyị ozi.
Kedụ ka m ga-esi nye iwu?
Nke mbụ, gaa na ụlọ ahịa anyị na Joopzy
Họrọ ngwaahịa na ị hụrụ n'anya, wee pịa “Tinye na ụgbọ ibu"Na"Lelee".
Wee jupụta ozi gị ma kwụọ ụgwọ.
Ọ bụ ya! Dị mfe.
Kedu ka i si ebu?
Anyị na-ebufe iwu na mba ofesi site na ozi nzi ozi.
Mgbe anyị mechara nhazi iwu gị, anyị ga-eziga ya na ụlọ ọrụ mbupu, ha ga-ejikwa ya kpamkpam. Mgbe ị rutere n’obodo gị, ndị ọrụ nzipu ozi obodo gị ga-edozi ya. Biko biko jiri nwayọ kpọtụrụ post gị mgbe ọ bịarutere mba gị.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ a nabatara na Joopzy?
Anyi na-anabata Paypal, debit / kaadị akwụmụgwọ, yana cryptocurrencies.
Ogologo oge ole ka nnyefe ga-ewe?
Anyị na-ebuga n'ụwa niile, oge mbupu anyị na-abụkarị n'ime 7-10 ụbọchị azụmahịa na USA, na 12-1Businessbọchị azụmaahịa 5 mba ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ nwere ike buru oke 20 bọchị azụmahịa ga-abata, dabere na ọnọdụ gị yana ogologo oge ọ ga-ewe iji si na omenala.
Gini bu iwu nloghachi gi?
Anyị ga-akwụghachi gị n'ọnọdụ ndị a:
* Ọ bụrụ na ngwongwo ndị ahụ mebiri emebi
* Ọ bụrụ na ịtụkwasị iwu gị erughị 45 ụbọchị azụmahịa
* E zigara ihe ndị na-ezighi ezi
Enyewo m iwu ọtụtụ ihe ma ọ bụghị ha niile rutere
Anyị na-ebugharị ọtụtụ ngwongwo na ngwugwu dị iche iche iji zere igbu oge ọ bụla na omenala. Nke a pụtara na ha nwere ike ịbịa oge ndịiche.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, okwu gbasara iwu, wdg, gbaa anyị ozi ngwa ngwa!